Afaka bevohoka ve aho herinandro mialohan'ny fialan-tsasatra?
Na dia eo aza ny "fiarovana" ambany, ity fomba fiasa fanabeazana ity, amin'ny maha- physiologique azy, dia be dia be amin'ny vehivavy. Ity fomba fiasa ity dia ny fanilihana ny fifandraisana ara-nofo mandritra ny ovulation ary andro vitsy alohan'ny hahatongavany. Ny andro toy izany dia matetika antsoina hoe "tsy azo antoka", satria Ny mety hitrangan'ny zezika amin'izao fotoana izao dia tena avo lenta.
Amin'ny fampiasana an'io fomba fijerin'ny tovovavy fanabeazana io, dia matetika no mieritreritra raha afaka bevohoka ianao alohan'ny vanim-potoanan'ny reny na herinandro alohan'ny hanombohan'izy ireo, ary inona no mety hitranga. Andeha isika hiezaka hahatakatra izany toe-javatra izany ary hanome valiny amin'ny fanontaniana.
Afaka bevohoka ve ny vehivavy alohan'ny iray volana, herinandro mialohan'ny fialan-tsasatra?
Ny valin'ny dokotera amin'ity fanontaniana ity dia tsara. Raha manazava io zava-misy io, dia omeny ireto hevitra manaraka ireto.
Voalohany, tsy misy vehivavy afaka mirehareha amin'ny fiatombohan'ny taom-pandrosoana sy ny faharetan'ny tsingerina. Noho ny antony isan-karazany, saiky ny olona rehetra no miatrika ny tsy fahombiazany - avy eo ny isam-bolana dia miverina aloha, dia mihena ny faharetan'ny orana mandritra ny 1-2 andro. Mandritra izany fotoana izany, misy ny fiovan'ny fizotry ny ovulatory, izay tokony ho marihina eo afovoan'ny tsingerina. Tsara homarihina fa amin'ny tranga toy izany dia mety hitranga ny fiantohana ny fitondrana vohoka noho ny fanitarana ny dingana voalohany amin'ny vanim-potoana, i.e. rehefa tara ny ovina.
Faharoa, ny fahafahana ho bevohoka alohan'ny fadimbolana dia noho ny antony iray toy ny faharetan'ny zebra lahy. Raha nitranga nandritra ny andro vitsivitsy talohan'ny fisarihana ny firaisana, dia mitazona ny asany sy ny fahazotoany mandritra ny 3-5 andro ny sivana sisa tavela amin'ny taovam-pananahana.
Fahatelo, mety hampidi-doza ny vehivavy bevohoka herinandro mialohan'ny volana hampiakatra ny fisotroan-dronono misy fanafody na miala sasatra, fa tsy manomboka ny fandraisana izany amin'ny 5 andro aorian'ny fanombohan'ny taom-bolana.
Inona no mety hiterahan'ny vehivavy bevohoka herinandro mialohan'ny fialan-tsasatra?
Tsy misy antontan'isa momba ny statistika momba io lohahevitra io ao amin'ny boky ara-pitsaboana. Na izany aza, ny zava-misy dia azo atao izany - tsy mandà ny dokotera.
Izany no mahatonga ny dokotera manoro hevitra amin'ny fampiasana fanabeazana aizana, indrindra ireo tovovavy ireo izay manana tsingerina tsy ara-dalàna na manana fiainana ara-nofo tsy ara-dalàna. Raha ny marina, ny tranga mety hitranga dia ny fitomboan'ny hormona, izay mety hisy fiantraikany amin'ny ovulation, ny faharetany.
Ny tovovavy tanora dia matetika no mitranga amin'ny tranga tahaka ny ovulation roa, raha ao anatin'ny faran'ny 2 dia misy atody iray afaka manalavitra. Ato anatin'ity toe-draharaha ity, ary afaka bevohoka ianao herinandro mialoha ny fanombohana ny fialan-tsasatra isam-bolana.
Fandroahana amin'ny gynécologie
Famantarana ny homamiadan'ny tranonjaza
Ny volo amin'ny tendrontany
Ahoana ny fandinihana ny tsingerim-bolana?
Ahoana no fisehon'ny cystitis amin'ny vehivavy?
Afaka bevohoka ve aho raha manasa ny tenako taorian'ilay hetsika?
Lamina fotsy eo amin'ny labia
Ny papilôma intra-ductular de la durée malgache - causes, symptoms and treatment
Ahoana ny fampitàna ny herimpon'ny vomanga?
Aretina polypika amin'ny vehivavy - soritr'aretina
Ny fanalan-jaza ao an-trano
Anarana amin'ny endriky ny vehivavy
Vareniki miaraka amin'ny strawberries - recipe
Sakafo ara-tsakafo ho an'ny vehivavy
Fanamboarana ny volokom-borona - famantarana sy fitsaboana
Fiakaran'ny lohataona 2014
Ahoana ny fomba hanesorana ny hatezerana eo ambany maso?
Ahoana ny handoko ny tapakila?
Karana miaraka safira
Inona avy ireo bobongolo?
Botanical Garden of Namibia
Fiainana ara-nofo aorian'ny fanalan-jaza
Niche avy amin'ny gitara miaraka amin'ny hazavana